Uvavanyo Ndizame iblogger! | Iindaba zeGajethi
Du-omingo, nge-12 ka-Agasti 2007, iposti yokuqala epapashiweyo inezizivakalisi nje ezimbini ngezi zivakalisi zilandelayo "Hahaha, sele ndinayo ibhlog ... kwaye ngoku uloyise ihlabathi !!«. Kwiinyanga ezine kamva kwaye kungqamana nokupapashwa kolu hlalutyo, ndifumana esi sihloko »Ibhlog eneminqweno esempilweni ... (akukho nto inokuloyisa ihlabathi okanye izinto ezinjalo)«. Ukunqongophala kwememori Mhlawumbi yinto nje encinci yesigqi esiphumayo Ndizame blogger! (okanye hayi)…
Dukubeka amahlaya ecaleni ... kulungile akunakwenzeka ukuba ubashiye kuba le bhlog inikezelwe ngqo ekuboniseni eyabanye kunye neyabanye abantu eqokelelwe kwiimbombo ezikude ze-Intanethi. Lo ngumxholo wale bhlog kwaye kwi-header yayo ubhengeza ngokucacileyo. Kodwa ngaba iyayiphumeza injongo yayo yokonwaba? … Ewe, kodwa ngokuyinxenye.
Dmasenze izinto zicace ukusuka kwindawo yokuqala, Yintoni ubizo lwale bhlog?. Ukuba yibhlog yakho kunye nombhali wayo (ithiyori kukho izithuba ezininzi kodwa kuphela Mnu blogger) uzenza ngathi unendawo emnandi yokwabelana nabahlobo bakhe kunye nolunye undwendwe ngamanye amaxesha, ndicinga ukuba uyayifezekisa injongo yakhe ngaphezu kokwaneleyo. Indawo iyonwabisa kwaye inamaxesha ahlaziyiweyo okwaneleyo anomdla. Kodwa ukuba unethemba lokufumana utyelelo ngakumbi kuya kufuneka utshintshe ezinye izinto.
Ele bhlog akananto angazingcikiva ngayo Awunakutsho ngokuthe ngqo ukuba ayihlaziywanga, uyilo lwayo alunasidima, ukuba imixholo ayiniki mdla, okanye nantoni na enjalo. Kunokuthiwa ngokuchasene noko, ibhlog iyahambelana nayo yonke le micimbi kwaye iposti ibhalwe kakuhle kwaye ngaphandle kweempazamo zopelo.
Yintoni elahlekileyo kule bhlog emva koko?
EUyilo luchanekile, kodwa ifayile ye- itemplate esetyenzisiweyo ixhaphake kakhulu kwaye umbono wokuqala xa ufika kule ndawo kukuba iya kuba ibhlog enye. Amatyathanga zininzi kakhulu iividiyo zilandelelana Kwaye sele siyazi ukuba ngamanye amaxesha iqhuba izikhangeli, kwaye ayilunganga le nto. Wena akukho mbhalo ukuya kumanqaku, akukho mbhalo Uphando ungatyi kwaye ukuba awumtyisi umceli izakudlula kuwe. Okokugqibela kwaye okona kubaluleke kakhulu ukuba ufuna ukuba indawo ikhule, umxholo.
PUkuze ibhlog ikhule, nokuba yeyiphi na umxholo, ifuna amakhonkco angenayo. Umxholo opapashiweyo unomdla kakhulu, uyonwabisa kwaye uyonwabisa, kodwa upapasha uninzi lweendawo ezaziwayo. Uninzi lweeblogger ezihambele Ndizame blogger! Baya kufumanisa ukuba sele bezifundile ezo zithuba kwezinye iindawo kwaye ngenxa yoko abanakufane banxibelelanise ibhlog yazo Mnu blogger
Into emnandi ngayo yonke le nto
Pinto elungileyo ngayo yonke le nto yile Yonke into inesisombululo «esilula». Yongeza ezinye izicatshulwa kumanqaku, ngombono ungagcwalisi, shicilela amanqaku ngakumbi afundwe ngokuthe ngqo kolunye ulwimi (sele iyenzile kwezinye ezinje Iinyani ezingapapashwanga? Chuck Norris nabanye ...) Kwaye ujonge itemplate encinci e-hacked okanye ukuba uhleli kakuhle nale unayo, ubuncinci utshintshe imibala ukuze ibonakale yahlukile.
Pokanye okokugqibela kufuneka azame ukwenza umxholo wakho ngakumbi (nangona ndiyazi ukuba le yeyona nto inzima kakhulu) kwaye ufunde okungakumbi malunga nemicimbi ye-SEO. Kule mihla akunakwenzeka ukuba uvumele (kwibhlog enqwenela ukutyelelwa) ukuba igama lebhlog livele kwindawo nganye isihloko yesiza. Ukuphucula Iindlela ze-SEO Ndikucebisa ukuba sele unoluvo malunga nesihloko, i-MP3d- Ukubekwa kwe-SEO kunye I-SEO yobungcaliUkuba uqala ekuqaleni, ndicinga ukuba kungcono utyelele i-SEOTECA.
PUkuqukumbela ndifuna ukuyikhumbula loo nto Mnu blogger kunye nayo Ndizame blogger! Bebekwibala lezemidlalo iinyanga ezine kuphela, kwaye kulapho inokuthi iqale ukukhula. Sele uneziseko ezisisiseko zokwenza, kufuneka upolishe kwaye usebenze. Ndiyathemba ukuba andiphazami kwaye ndibone ukuba kancinci kancinci mr blogger ufumana ibhlog enomtsalane ngokulinganayo, kwiinjini zokukhangela, iindwendwe kunye neebhlog. Imibuliso yeVinegary.
Akufanele uphoswe: Masonwabe, engaqhelekanga ... eBay
PD: Ukuba ufuna ukuvela eVinagre Asesino, thatha inxaxheba kwi-SIN.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uvavanyo Ndizame iblogger!
Ndiyakuthembeka, ndicinga ukuba indawo ilahlekile zizinto ezininzi kwaye uninzi lubi:
1) Ivula iphepha elivelayo xa ungena
2) Unokwenza ukuskrola okuthe tye, into ecaphukisayo ukuba kufuneka uyenze ukuze ubone umxholo (akunjalo), kodwa ibha isezantsi kwaye iluhlobo "lokungcola" kwaye isusa indawo kwibhlog
Okwesithathu) andiluthandi uyilo, ibha esecaleni ibonakala ngathi ayilungelelananga
4) Amaqhosha angezantsi apikishwe kakhulu
Ewe, ezo kukugxeka kwam okuncinci. Ndiyathemba ukuba uMnu blogger uyasithathela ingqalelo ukwenza uhlengahlengiso oluthile kwibhlog yakho
Ewe, uzilungisile izinto ezininzi, uyilo kunye nebar esecaleni. Ukucwangcisa ibar esecaleni ndicebisa ukuba utshintshe umbala weetayitile, umhlophe kunzima ukuba ndifunde (andazi, luluvo lwam) kwaye ubeke izinto eziluncedo ngakumbi. Kungenxa yokuba ekuphela kwento endiyifumana iluncedo kukho iqhosha lokurhumela kunye nefayile engezantsi yayo yonke into. Ke mhlawumbi ubeka ezi 2 ngasentla, yongeza iindidi, kunye nezinye ezingezantsi. Kwaye ibha esecaleni ikwabizwa ngokuba iyinkunzi (ndikholelwe, ijongeka ingcono)
I-PS: Iindaba ezimbi, i-pop-up isekhona
uhm ... Khange ndibaleke nge-epiphany ... ndizakuyijonga ngcono ukuze ndibone ukuba ngubani unobangela.
Ewe, ndicinga ukuba ngoku ndiyisusile i-pop-up edumileyo (ndiyathemba!). Ngapha koko, ndicinga ukuba ifayile kufuneka iye phezulu, kodwa andizukuyibeka ngaphezulu kwemigca. Ndiyazi ukuba aziloncedo kwimbono yebhlog yam, kodwa bayinika i-vibe ethile (iyayichaphazela ifuthe loyilo kancinci). Into yokutshintsha umbala omhlophe woonobumba ... ndingayenza mnyama umbala ongasemva, ukuze ume ngakumbi. Into yoonobumba abakhulu ... kungenxa yomxholo. Ndithembe, ndineeleta ezinkulu apho. Umcimbi wokwenza uphando ngakumbi kunye nokutshintsha isitayile.
Ewe ndiyabona kukho intshukumo ejikeleze apha. Ngokuphathelele into evelayo, ayibonisanga kwi-firefox kwaye khange ndiyiqonde, kuya kufuneka ndiqale ngokujonga iisayithi ze-IE. Kwaye kulungile ukwenza utshintsho kuyilo kancinci kancinci kwaye xa uziva ngathi. Into ebalulekileyo ngumxholo kwaye ukuba uyilo luhamba ngcono. Umbuliso kunye nombulelo ngezimvo.
Iviniga, iFirefox isungula isilumkiso esivelayo 🙂
Ke, nokuba ndiyalicaphukela iphepha, okanye uya kuba nakho ukulibona 🙂
Ngaba usalungisa i-pop up? joer! Ewe, andizifumani kwi-firefox okanye kwi-opera okanye kwi-Explorer, kodwa ndiza kujonga kwakhona ngomso kwenye ikhompyuter xa kunokwenzeka.
Ewe, ndicinga ukuba ndiyisusile ingxaki yezihloko (bendingekayeki ukuzijonga, ngenene, kwaye ukuba bendinazo, ngekhe ndicinge ukuba iyakuchaphazela ukuma kakhulu). Kuthathe ixesha ukuba nditshintshe, kuba awunakutshintsha kwiimenyu zebhlog, kwaye ayonto inkulu ukuyenza ngesandla ngokubuyisela itemplate.
Kuyimfuneko ukushumeka ikhowudi ekhethekileyo kuloo nto (usebenzisa iwijethi api kubonakala ngathi umntu othile ukwazile ukubuyisela umva isihloko sebhlog - isihloko seendaba kwaye uthathe isigqibo sokulahla ikhowudi ukuze abantu abanjengam bayisebenzise ngaphandle kokugwetywa: P).
Ndaphinda ndatshintsha umbala wecala elisecaleni, ukuze umbala omhlophe kunye nohlaza okwesibhakabhaka kunye nokubhaliweyo okuqhelekileyo kubonakale ngakumbi kwaye kulula ukufundwa, kunye nokulandelelana kwezinto ezithile zebar yecala.
Ngapha koko, ndicinga ukuba ibilusuku olunemveliso kakhulu. Ngoku ukuphumla!
Kulungile ukufumana ukugxekwa ukuze ukwazi ukuphucula kancinci kancinci, kwaye ndisayinele apha.
Kwinto "yoyilo loyilo kwakhona", ngenye imini ndiza kuyifumana. Ndiyazi ukuba luyilo oluqheleke kakhulu, kodwa isabonakala iyinto entle, isengqiqweni kwaye iyasebenza kum, ke ndiyikhuphile kancinci, "ndiyinyibilikisa" kancinci nangakumbi (enokubangela ukuba ezinye izikhangeli zisuse iscroll Imivalo; Kuya kufuneka ndivavanye ukuba ijongeka njani nge-opera kunye ne-explorer ... okanye mandithi nje nge-explorer -I trust opera: P-).
Into malunga nephepha elivelayo, njengoko ndingakhange ndiqaphele (ndihamba ngefirefox ndisebenzisa i-noscript). Inokuba lolunye lokongezwa kumaphepha eenkcukacha-manani, athe athabatha inkululeko enkulu kwiakhawunti, kwaye sele ndithatha ixesha elide ukuyisusa!. Amaqhosha ... ndicinga ukuba anje kuba zoluliwe ukuze zonke zibe nobubanzi obulinganayo.
Okokugqibela, ndingathanda ingcebiso ngendlela endifanele ukuba ndicwangcise ngayo i-sideber.
Ewe ndicinga ukuba ndiyilungisile i-popup kunye ne-toll bar scroll scroll, ah! kunye ne-pixelation yamaqhosha (ngoku zilungelelanisa ngakumbi kubungakanani bendalo kwaye azenzi pixelate kangako).
Ngoku ukuphakama kobuso, kunye nokwandisa isabelo somxholo wakho ...
Ngapha koko, nokuba imixholo "ibolekwe", ndihlala ndityala imali yokwenza umsebenzi omncinci ukuwugcwalisa / ukuwuzalisekisa, ekufuneka nawo ubale ...
Ngokubhekisele kwiividiyo ezininzi ngokulandelelana ... inyani kukuba isiqingatha seposti kunye nevidiyo sinokuhlulwa kwaye sipapashwe kwiindawo ezahlukeneyo ... (kwakhona, ucinga nje ukuba ucinezela inyanga ukubona zonke izithuba, nantoni iibrowser ezineevidiyo ezingaphezu kwesihlanu ngokulandelelana ...)
Ipop-up ihambile 🙂
@Frikiman firefox uyakucaphukela, andikayiboni ngomhla wayo kwaye khange ndiyibone emva kokuba uyitshilo
@manolo ulungile malunga nezihloko, into endizibuza yona kukuba le khowudi iyakuvumela, ukongeza ekubuyiseleni phambili iodolo, ukuba ususe ngokuthe ngqo igama lebhlog yakho esiphelweni sesihloko. Nditsho oku ukuze uphucule uxinano lwamagama aphambili kuwo.
Kutheni iza kuba njalo?
I-SO? Okanye ingxelo firefox?
Yonwabiseni abantu kuvavanyo lwe-meblogger ...
Uqala kancinci kwaye nomsebenzi omninzi uhamba indlela ende.
Hehe enkosi augus!